9 မှ 90 သိကောင်းစရာများ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
9 မှ 90 သိကောင်းစရာများ
ပထမဦးဆုံးအကြိမ် reboot ။ တစ်ခုတည်း relapse မပါဘဲအကွာအဝေးသွားလေ၏။ PMO, MO ကို, peaking, edging, စတာတွေအဘယ်သူမျှမကဘာလဲအောက်ပါအတိုင်းအောင်မြင်မှုအဘို့အကြှနျုပျ၏အသေးစိတ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးပုံပြင်။
၁) သုတေသန။ သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်မှဆောင်းပါးအားလုံးကိုဖတ်ပါ။ ဒီနေရာမှာအကောင့်ကို rebooting ဖတ်ပါ။ အောင်မြင်မှုပုံပြင်များကိုဖတ်ပါ။ လေ့လာမှုများကိုဖတ်ပါ။ ထို့နောက်သင်သည်သွေးဆောင်မှုခံရသောအခါ၊ သင်ဘာကြောင့် reboot လုပ်နေသည်ကိုအတိအကျသိပြီးပြန်လည် relapse ကိုရွေးချယ်ရန်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်အပြည့်အ ၀ ယုံကြည်မှုရှိပါကမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုအတိအကျသိထားသည်။ မည်သည့်သံသယမဆိုမသေချာမရေရာပျက်ကွက်စေပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ပထမရက်သတ္တပတ်စုံတွဲသည်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်ဖြတ်သန်းပြီးရလဒ်များကိုစတင်တွေ့ရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။
၂) ပြက္ခဒိန် + ကောင်တာ။ ဒီမှာ YBR အသင်း ၀ င်တွေအတွက်တာဝန်ခံစေမယ့်ကောင်တာရှိတယ်၊ ပြီးတော့လက်ပ်တော့ဘေးကပြက္ခဒိန်ကတိုက်တွန်းတဲ့အခါတိုင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေတယ်။ PMO / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပါဘဲလုပ်သောနေ့တိုင်းကျွန်ုပ်သည်ဟာသမရှိပါ။ ရက်အနည်းငယ်၊ ကျွန်ုပ်သွေးဆောင်ခံရသည့်မည်သည့်အချိန်မဆိုကျွန်ုပ်ပြုလုပ်သောနာရီတိုင်းထိုလိုင်းကိုတစ်နေ့လုံးဖြတ်သန်းလိမ့်မည်။ မကြာမီအချိန်သည်ရက်များဖြစ်လာပြီးနေ့များသည်ရက်သတ္တပတ်များဖြစ်လာပြီးသင်ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ခြေရာခံရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်ရက်ပေါင်း ၉၀ လုံးလုံးသင်ကြည့်လျှင်သင်ဘယ်တော့မျှပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ပထမဆုံးတန်ဘိုးကို ၃၀ ထားရန်အကြံပြုလိုသည်။ ထို့နောက်သင်နီးကပ်လာလျှင်၎င်းကို ၆၀ နှင့် ၉၀ သို့တိုးချဲ့ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်။ ပြန်ပြောင်းကြည့်ရမည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်လုံးဝသိပ်မကြာလှပါ။ ပိုကောင်းတဲ့ဘဝအတွက်ရက်ပေါင်း ၉၀ လုံးလုံးမလုံလောက်ဘူး။
3) ကဒီမှာပို့စ်တင်နေသည်။ ဤသည်ကြီးမားသောဖြစ်ပါတယ်။ (အများဆုံးယောက်ျားတွေစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံလာသောအခါအိမျတျော / ရုံးထဲကရတဲ့အကြံပြုသော်လည်း) ငါစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့သည်ဘယ်အချိန်မဆို, ငါသည်ဤ site ပေါ်တွင်ခုန်ခြင်းနှင့်ရေးသားချက်များအပေါ်တက်ကိုဖတ်လိမ့်မယ်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်လှုံ့ဆျောမှုဆုံးရှုံးတွေ့ရှိခဲ့ဘယ်အချိန်မဆို, ငါသည်ဤ site ပေါ်တွင်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပံ့ပိုးမှုအလွန်အရေးပါသည်!
၄) လေ့ကျင့်ခန်း။ သင့်လျော်သောအစာအာဟာရ။ အအေးမိ သုံး ဦး စလုံးသည်သွေးစီးဆင်းမှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ O4 နှင့်သွေးစီးဆင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။ သင်ပထမနှစ်နံနက် / အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းကိုနှစ်များတွင်ရရှိသည့်အခါသင်သည်သင်ဘယ်သောအခါမျှညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုဘယ်တော့မျှပြန်သွားတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုမိလိမ့်မည်။ Reboot လုပ်ပြီးတဲ့နောက်သင်ကိုယ်တိုင်ဒါကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့ချဲ့ထွင်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ် လုံးဝမထိဘူး reboot ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲပင်သင့်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးသည်။ MO ကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ကောင်လေးတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပါ။ ၁) MUCH, MUCH ပိုရှည်ပြီး ၂) သူတို့ကချွင်းချက်ပါ။ သငျသညျအများဆုံးဖွယ်ရှိ (ပြောစိတ်မကောင်း), ခြွင်းချက်မရှိကြပေ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးသားပါ
၅။ အားရှိပါ။ PORN သည်ရွေးချယ်စရာမရှိတော့သောအတွေးအခေါ်ကိုရယူပါ။ မင်းရဲ့ဘဝကိုဘယ်လောက်ရှုပ်ထွေးစေတယ်ဆိုတာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ချရေးပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖတ်ပါ။ ယောက်ျားအချို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်စတင်ရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ သူတို့နှင့်မတူပါနှင့်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ သည်ယေဘူယျအားဖြင့်ကြာသည်။ ခရီးကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ပန်းတိုင်ငယ်များနှင့်မှတ်တိုင်ငယ်များကိုသတ်မှတ်ပါ။ Day5မှသင်နောက်ထပ်ဝေးလေလေ PMO နှင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးလေလေပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်မအောင်မြင်ပါလေ။ ဒုတိယအချက်မှာသင်၏အကြီးမားဆုံးထောက်ခံသူနှင့်အပြင်းထန်ဆုံးဝေဖန်သူဖြစ်ပါစေ။ Reboot လုပ်နေစဉ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုမိုမြင့်မားသောစံနှုန်းအတိုင်းထားပါ။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပညာရှင်တွေကထပ်မံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာအခက်ခဲဆုံးအရက်သောက်တတ်လေ့ရှိပြီးအရက်သောက်တာဟာနည်းတာထက်ပိုသက်သာတာထက်နည်းသွားတာပါ။
6) K9 Web ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ ဤအကောင့်ပေါ်တွင်မျိုးစုံထင်မြင်ချက်များရှိပါတယ်။ တချို့ကတင်းကြပ်စွာသင့်ကိုယ်ပိုင်သန်နိဋ်ဌာနျကိုအသုံးပွုဖို့ပြောကြပါတယ်။ အခြားသူများကိုကပြန်ဖွင့်ခိုးဖို့အားနည်းစိတ်လမ်းဖွင့်ဆိုကြသည်။ ငါမိုက်မဲ fuckkking ရဲ့ဆိုသညျကား, ဒီ Shit ကိုရယူပါ။ အလေးအနက်ထား။ တစ်နေ့တဦးတည်းတွင်။ အဘယ်သူမျှမ, တကယ်ပါ။ အခုဖတ်နေရပ်တန့်က install go; သင်ရနိုင်သမျှသောအကူအညီလိုတော့တာပေါ့။ ဘေးဖယ်: သင့် BLOCKER က cheat မ။ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့, ခန္ဓာကိုယ်ဆေးသုတ်ခြင်း, လုယူ pics ပေါ်လာတဲ့အခါသင်နေတုန်းပဲ Self-ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျ tabs များဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ် "မီးခိုးရောင်" ဒေသများတွင်ရှာဖွေ start ပြီးတာနဲ့သင်ကလိမ်နေတာပါ။
7) အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူ Rewire ။ သင့်ရဲ့ reboot စဉ်အတွင်း MO'ing Quit ။ ဖြန့်ချိအဘို့သင့်သာထွက်ပေါက်တစ်ဦးစိုစွတ်သောအိပ်မက်သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နဲ့အမှန်တကယ်တှေ့ဆုံသည်ဆိုပါက, သင်ပိုမိုသင့်အသက်တာ၏ဧရိယာတိုးတက်စေရန်အတွက်အလုပ်ထားရန်မှုတ်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ Laptop ကိုနောက်ကွယ်မှပုန်းအောင်း Quit ။ ဆင်ခြေအောင် Quit ။
8) Self-တိုးတက်မှု၏အခြားဒေသများသို့ Springboard အဖြစ် reboot ကိုသုံးပါ။ ကြံ့ခိုင်ရေး။ Diet ။ ချိန်းတွေ့။ အလုပ်ရှာဖွေရေး။ ဝါသနာ။ ကျောင်း။ ဝိညာဉ်ရေး။ ဘာဝနာ။ ပြန်ဖွင့်သင့်ဘဝကိုထိန်းချုပ်နှင့်သင့်ယောကျ်ားဘဝ retaking အကြောင်းပါ။ ဒါကြောင့်ဘက်ယမ်းနှင့်အမြော်အမြင်ရှိရှိသင်၏အချိန်ကိုအသုံးပြုပါ။ ကနှင့်အတူကပ်နှင့်သင်သည်သင်၏ဒစ်ပြန်ရလိမ့်မယ်။ porn နှင့်အခြားအနုတ်လက္ခဏာအလေ့အထပေါ်တွင်သင်ဖြုန်းတီး (နှင့်ဖြုန်းဆက်လက်) ဖူးတဲ့အချိန်ကိုအစဉ်အမြဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအခွင့်အလမ်းများကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သံသရာထပ် Quit ။
9) နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သင့်စွဲဖြစ်လာသည့်စွဲလမ်းကန်ပါစေပါဘူး။ ဘာကိုစောင့်ရမှာလဲ? yeah, သငျသညျအကြှနျုပျကိုငါကြား၏။ ဤနေရာတွင်အပေါ်တချို့ကယောက်ျားတွေနာရီအလုပ်နှင့်တူတိုင်းနှစ်ပတ်အတွင်းပြန်သွားကြသည်။ "LOL, ယောက်ျားတွေပဲတစ်ရှူးသို့ရောက်ကြ၏။ Shit, ငါသည်အစို့။ ငါသည်ဤအသိုင်းအဝိုင်းကိုချစ်။ ငါ့ကို Coddle ။ "လူသညျထ fuck ဆိုတဲ့! rebalanced ကဲ့သို့ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်, တကယာယီထောက်ခံမှုအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ပါနှင့်အစစ်အမှန်ကိုဤလောကသို့ fuck ဆိုတဲ့အထဲကရသင့်ကိုယ်ပိုင်သူကပြောတယ်ခြေထောက်ပေါ်ရပ်တယ်။ သူတို့အထဲကသွားနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူအသေးဟောပြောပွဲလုပ်ရှိပါကအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်အရာကိုကြောက်လန့်နေသောကြောင့်, များလွန်းယောက်ျားတွေဟာသူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုဖျက်ဆီး။ နေ့ 88 နှင့်ဖွင့်ဆိုပါကသင်ကရီစရာယင်းကြောင့်လိင်, ရထားလမ်းများအတွက်အခွင့်အလမ်းရရှိပါသည်။ တစ်ဦး reboot နောက်ကွယ်မှသင့်ရဲ့မလုံခြုံမှုဖုံးကွယ်မထားပါနဲ့။
stats: 25 ။ အလွန်ငယ်ရွယ်ဓါတ်ပုံတွေအပေါ် Started ။ 15 ကတည်းက high-speed ။ ကြည့်ရှုခြင်းအသစ်အဆန်းအဖြစ်ဝေးနှုတ်ပျက်စီးခြင်း, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု, စက်နှင့်တပြိုင်နက်ဖွင့်လှစ် 20 HD ကို tabs များအထိအတူ GBs အဖြစ်ရရှိခဲ့သည်။ ငါ၏အဆယ်ကျော်သက်တစ်လျှောက်လုံးရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံဖက်။ 20 မှာပထမဦးစွာ PIED ။
ညစ်ညမ်းဖို့ ပို. ပို. လှည့်စီ ED အတွေ့အကြုံနှင့်အတူစစ်မှန်သောမိန်းမတို့အားလျော့နည်းခြင်းနှင့်လျော့နည်း။ နောက်ဆုံးတော့ ED မူးယစ်ဆေးဝါးများမရှိဘဲအဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်။ ငါသောက်သုံးသောနှစ်ဆစတင်ခဲ့သည့်အခါ YBOP ညာဘက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
NO PMO ရလဒ်များ:
အကြီးအကျယ်တိုးတက်အသားအရေ။ ကြှနျတေျာ့တစျခုလုံးကိုနောက်ကျော, အထက်ရင်ဘတ်နှင့်ဝက်ခြံတွေဖုံးလွှမ်းခံရဖို့အသုံးပြုပခုံး။ တောင်မှ tanning ကုတင်နှင့်ခံတွင်းဆေးအပေါငျးတို့သအညစ်အကြေးကိုမကွယ်နိုင်။ အနည်းဆုံးအသားအရေထုတ်ကုန်နှင့်အတူယခုဘာမျှမဘေးမှာ။ အေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းလည်းဤအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစား
ပိုပြီးစိတ်ကျရောဂါ (ငါရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ကုန်ထုတ်စွမ်းအား၏ရက်သတ္တပတ်ဆုံးရှုံးဖို့အသုံးပြု / ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကို / ညစ်ညမ်း / အသားတင် surfing / စိတ်ကူးယဉ်) အဘယ်သူမျှမ
ပိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန် + တိုးလာအကောင်းမြင်ခြင်းမရှိပါ
အစိုင်အခဲနံနက်သစ်သားနေ့တိုင်း။ ။ အခုတော့တစ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် Started ငါအိပ်ရာမှလက်ဝှေ့သမားဝတ်ဆင်လျှင်, ငါ့စိုက်ထူစာသားညဉ့်အလယ်၌ငါ့ကိုနှိုးပါလိမ့်မယ်
ပိုကြီး flaccid Hang
ဒီထက်စိတ်တိုတာတွေ (reboot အစောပိုင်းအပေါ် though- ပြီးနောက်, ကတော်တော်လေးဆိုးရွားရနိုင်)
အားကစားရုံအတွက်အကျိုးအမြတ် (ယခုကအဓိက LIFT အပေါ် 5-10lbs ရဲ့ LIFT အပေါ်တစ်လလျှင် 15-20lbs add လေ့ရှိတယ်။ အလေးချိန်ငါ၏အ 190lb ဘောင်များအတွက်ကြောက်စရာရတဲ့ကြောင့်ကီထိုင်ခြင်းနှင့် Dead အပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ခဲ့)
ပိုများသောအာရုံနှင့် drive ကို
နှိမျ့ခခြွငျးကို ထောက်. ကိုပိုပြီးဆင်ခြင်တုံတရား standards- ကျွန်မအနေနဲ့အထက်-ပျမ်းမျှအားရှာဖွေနေကောင်လေးပေါ့့ပြောပါလိမ့်မယ်။ YBOP ခင်မှာ, ငါ့စံချိန်စံညွှန်းများဒေါသထွက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည်ငါ၏ pornstar စံမကိုက်ညီခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ 2-3 ကြည်ညိုဆွဲဆောင်မှုအမျိုးသမီးတွေတစ်ပါတ်ကိုဆင်းဖွင့်မယ်။ နောက်ဆုံးတော့ကျွန်မနှင့်အတူအိပ်ပျော်တစ်ခုတည်းသောအမျိုးသမီးတွေကြီးတွေ tits, မြည်းနှင့်, ဖေဖေကိစ္စများနှင့်အတူသိပ်ပြီးမ, Stripper နှင့် nymphos ခဲ့ကြသည်။ တောင်မှထို့နောက်ငါစိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆေးပြားလိုအပ်လိမ့်မယ်။ အခုတော့ငါ mom, နှင့်အဖေမှအိမ်ပြန်ယူလာစိတ်ထဲမဟုတ်ဘူးမိန်းမနှင့်အမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေးတိုးတက်။
(9-10 မှခဏတာမှေးစက်ချိန်နှင့်အတူ 6-7 + နာရီညဥ့်မျှခဏတာမှေးစက်ချိန်မှ) လျော့နည်းအိပ်ပျော်ခြင်းလိုအပ်
ပိုကောင်းတဲ့ဆံပင်။ ငါဒေသတွေ hairline ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ခြုံငုံ texture ထွန်းလင်းအတွက်ကြမ်းနှင့်တက်တက်ကြွကြွစိတ်ပါဝင်စားဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုထုတ်ကုန်မရှိဘဲ hairline "ပြန်ပေါက်လာပါသေးတယ်" နိုငျစဉ်းစားကြဘူး, ဒါပေမယ့်သူကဆက်ဆက်သည်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ရပ်တန့်ရဲ့ကျန်းမာကြည့်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ခံစားရပါတယ်။
လက်တွေ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကို။ သည်အခြားယောက်ျားတစ်ဝှမ်းဆီးရသောအခါနီးပါး 8 လက်မနှင့် "စင်ကြောက်စိတ်" ဖြစ်ခြင်းရှိနေသော်လည်း "အရွယ်အစား" စိုးရိမ်ပူပန်ရလေ့ရှိတယ်။ အခုတော့ငါ့အစီးတစ်ဦး Savage ရေကာတာလွှတ်ပေးရန်ကဲ့သို့အိမ်သာတာမျိုး။
ငါသာငါ, ငါ၏ဆယ်ကျော်သက်အတွက် YBOP ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောအလိုရှိ၏။ ငါပြီးသားဤမျှလောက်အချိန်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပြီတူသောငါခံစားရတယ်။ ငါ relapse မပါဘဲအပြည့်အဝ 90 သွားကြဖို့နိုင်ခဲ့သည်ဘယ်ကြောင့်အရှက်ကွဲခြင်း၏ဤအထူးသဖြင့်ခံစားချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါ့နောက်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုထားရန်လိုခငျြနှင့် PMO နှင့်အတူမည်သည့်အချိန်ပိုမိုဖြုန်းတီးဖို့မသွားခဲ့သည်။ ယခုတွင်ငါသည် 25 မိပါတယ်။ "ငါသည် 30 အခါသာငါဆေးလိပ်ဖြတ်လျှင်, လူ" ငါ 25 ရောက်ရှိဖို့ချင်မစဉ်းစားရမည်
အပိုဆု: ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က4နှစ်များတွင်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးသဘာဝကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံခဲ့။ Threesome ။ လျင်မြန်စွာပထမဦးဆုံးစုံတွဲကြိမ်သို့ရောက်လာသည်ကား, ဒါပေမယ့် 10-15 မိနစ်အတွင်းရပြန်လေ၏။ ညဉ့်၏ကျန်တတိယအချိန်ကြာခဲ့သည်။ မိန်းမော ED ဆေးပြားသုံးစွဲဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံပေမယ့်မခဲ့သည်။ ဤသူကားငါ၏ reboot ၏နောက်ဆုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးဖြစ်ခဲ့သည်။ တဖန်ငါငါ့ကိုယ်ပိုင်ယောက်ျားသည်ဖြစ်၏။
link to post - ၉ ခုသိကောင်းစရာများ ၉၀